Juicy futhi cherry esihlwabusayo njalo ngonyaka kuvula izithelo ngenkathi kuqala. Wakhe ukuthanda boke - abadala kanye nezingane. lokucuketfwe ushukela High, amelwe ngesimo ne-glucose fructose, iqoqo olinganiselayo acid eziphilayo kanye vitamin C obuningi futhi kubalulekile ejenti hematopoietic hematogenous, ezifana yensimbi, i-folic acid kubalulekile kakhulu empilweni. Futhi imizwa abaningi baphatheka kahle kubangele lezi cute izithelo! Ngakho-ke, lapho ichaza izinzuzo cherry eyodwa kungaba enganciphisa omuhle isici ezingokwengqondo, ngenhlanhla omunye wemizila ebaluleke kakhulu engu esiphila kuzo ezicindezelayo ngokomzwelo.
Cherry ngokuthi "ukuba nomhawu" libhekisela ezihlukahlukene nge yokuvuthwa ngasekupheleni. Kuyinto esihlwabusayo kakhulu, ine okusezingeni eliphezulu izakhiwo yokudla kokubili fresh futhi yiluphi uhlobo processing. ujabule Sakhe kudla simisiwe, ngaphandle, wonke umuntu uyayithanda compotes kanye sezimoto. Cherry ngokuthi "ukuba nomhawu" kuyinto shirokookruglye izithelo umbala omnyama obomvu, ezimila ezihlahleni, ukuphakama medium nomqhele pyramidal. Amagatsha zitholakala nge-engela enkulu maqondana esiqwini futhi abe high density, ezikhulayo ngokushesha. Ibanga fruiting ikakhulu buketnye amahlumela. Ulibo ingatholakala eminyakeni emine emva kokutshala.
Cherry ngokuthi "ukuba nomhawu" - berry naphakathi, enesisindo ezinhlanu kuya amagremu eyisikhombisa nengxenye, has a endaweni emhlophe phezulu. Lokhu kudala kakhulu umphumela ahehe a bomvu emnyama, cishe fruitlets black ngenyama niqinile, ukhulele i ubude obuphakathi nendawo ohlangeni. Itshe lincane kakhulu futhi kalula kungenziwa ahlukaniswe. Ukwabela amamaki - jikelele, ukuphepha phakathi zokuthutha - esihle. Ukuze balimi kubaluleke kakhulu futhi ngenxa yokuthi cherry ngokuthi "ukuba nomhawu" has, ngaphezu eliphezulu izithelo, ukumelana ezimangalisayo ukuze isifo, kanye omuhle kakhulu hardiness ebusika, okuyinto ugcina zonke imbali efihlekile. Nokho, lapho self-impova ongaboshwa kuze kube amaphesenti ayisihlanu izimbali. Njengoba bempova ezifaneleke cherry "Bryansk pink", futhi "Iput" noma "raditsa".
Ukwanda ukuthandwa lokhu isiko lihlotshaniswa ngaphezulu neqiniso lokuthi kweziningi izifunda lapho bekhula cherry cherry leaf indawo ukutheleleka fungal kuyinsakavukela eminyakeni yamuva. Lesi sifo buthakathaka bese ebhubhisa ikakhulu cherry emasimini, ngenkathi izinhlobo cherry ngokuthi "ukuba nomhawu" futhi efanayo akuzona ekuthonyweni izifo. It kulondoloza amahlamvu kuze kufike isikhathi sokupheleliswa kwezinto zemvelo falling off, ngaleyo ndlela ukuqongelela imali eyanele izakhi lona amandla ebusika. Ngakho-ke i-cherry izithombo abatshalwé izindawo asebenzayo of ukulima, iziphi namanje kubhekwa ukuba zingabafaneli lokhu isiko eningizimu.
Lokhu lula okusezingeni eliphezulu ebusika hardiness izakhiwo izinhlobo ezifuywa eminyakeni yamuva. Okuhamba phambili kwe-kubo baziwa "Bryansk pink" futhi "nomona." Ngaphezu kwalokho, zingabantu ikhiqize kakhudlwana ngokuya isivuno kuka lo cherry, ngokwesilinganiso by 70%. Lolu cwaningo eneminyaka eyisithupha yabonisa abalimi. Ngakho, lo cherry ngokuthi "ukuba nomhawu" buya le engabizi futhi ezivamile izinhlobo eziningi, ikakhulukazi ezindaweni eziseNyakatho ukulima.
Bell eside uphawu ngalunye
Inhlabathi: belungiselela okutshalwe zemifino nezithelo izitshalo. Ukulungisa umhlabathi in ekwindla
Ephusheni esitebhisini ukukhuphuka ukuthini lokho?
Sifeza ukufakwa iminyango Sectional
Freddi Kryugera ijezi: umlando isithombe, incazelo nemibono ezithakazelisayo